Homeसमाचारह्वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?
January 20, 2021 admin समाचार 4824
बुधबार पनि नेपाली ब’जारमा सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ । मंगलबार प्रतितोला ९२ हजार रुपैंयामा कारो’बार भएको सुनको मुल्य आज तोलामा ५ सय रुपैंयाले बढेर ९२ हजार ५ सय रुपैंयामा कारोबार हुने सुनचाँदी व्यव’साय महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै बु’धबार तेजावी सुनको मुल्य ९२ हजार रुपैंया कायम भएको छ ।यसैगरी चाँदीको मुल्य पनि तो’लामा १५ रुपैंयाले बढेर १२ सय ६० रुपैंया का’यम भएको छ । – खबरहबबाट
May 31, 2021 admin समाचार 4025
October 6, 2020 admin समाचार 8815
साउथ फि’ल्मकी चर्चित एवं सुन्दर अ’भिनेत्री काजल अ’ग्रवालले आफ्नो विहेको अनाउन्स’मेन्ट गरेकी छन् । अभिनेत्री काजलले मंगलबार (आज) आफ्नो इ’न्स्टाग्राम अकाउन्ट’मार्फत् गौतम किचलुसँग ३० अक्टोवरमा विहे गर्दै गरेको जान’कारी गराएकी हुन् । कोरोना महा’मारीका कारण
March 17, 2021 admin समाचार 3316
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (223020)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (215038)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214713)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (213005)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211887)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210830)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209436)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209331)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177993)